Sunday, 12 Nov, 2017 4:49 PM
हेटौँडा, २६ कात्तिक - मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्र थाहा नगरपालिका– ६ बज्रबाराहीका कृषकले किबीखेतीबाट बर्षेनी लाखौँ रकम आम्दानी गरिरहेका छन् ।
‘एक गाउँ एक उत्पादन’ अवधारणाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले करिब रु. ३५ लाख लगानी गरी किबीखेतीसम्बन्धी तालीम, प्रविधि र बिरुवा सहयोग गरेपछि यहाँका किसान किबीखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
किबी प्रतिकिलो रु. २५० देखि रु ५०० सम्ममा बिक्री हुने कृषक रेखा सुवेदी बताउनुहुन्छ । उहाँले एउटा याममा करिब १२ टनसम्म किबी बिक्री गर्ने गरेको बताउनुभयो । अहिले बज्रबाराहीमा किबीखेती गर्ने कृषकको संख्या ५० पुगेको छ ।